Dukaanka Apple ee cusub ee Vienna, Austria, Febraayo 24 | Waxaan ka socdaa mac
Dukaanka cusub ee Apple ee Vienna, Austria, Febraayo 24
24-kii Febraayo, sida lagu sheegay cilmi baaris ay sameeyeen khubaro ku xeel dheer arrimahaas, Apple inay ka furayso Apple Store cusub Vienna, caasimada Austria. Goobtu waxay ku taal jidka dhexe ee Kärntner Straße, oo ku yaal aagga ganacsiga ee magaalada, halkaas oo bilihii la soo dhaafay, Apple ay dib u habeyn ku sameysay dhismayaasha isla markaana ay diyaarisay bakhaarkii furitaanka.
Dukaankan cusub, oo u dhow Stephansplatz, oo ku yaal bartamaha neerfaha waddan istiraatiiji ah oo lagu ballaarinayo shirkadda Californian ee Yurub, waxay yeelan doontaa 3 dabaq waxayna dagi doontaa geeska istiraatiijiga ah ku qalabaysan dhalooyin muraayad ah oo siinaya muuqaal casri ah oo hagaagsan.
La "Bakhaar" qaadan doono naqshada cusub oo lagu hirgeliyey dukaammadii ugu dambeeyay ee ay furtay sumaddu, waxaana ka muuqan doona Baas 'Genius Bar', iyo sidoo kale meelo ballaadhan oo loogu talagalay wadahadallada iyo koorsooyin kala duwan, dhammaantoodna la xiriira wax soo saarka Apple.
Xanta ku saabsan dukaankan ayaa si iskiis ah loo maqlayay muddo ka badan sanad (dhab ahaantii sanad ka hor halkan ayaan ka hadlaynaa, waxaan ka imid Mac, oo ku saabsan furitaanka suurtagalka ah midkan) laakiin, ugu dambeyntii, Waxay noqon doontaa 24-ka Febraayo ee soo socota markaan ugu dambeyntii arki karno dukaanka cusub ee wiilasha Cupertino ee ku yaal wadada dukaamaysiga mashquulka badan ee Kärntner Straße.
Gaar ahaan, Apple Store cusub ee Vienna waxay la wareegi doontaa goobtii hore ee dukaanka sumadda Ruuxa, goob aad u ballaadhan oo si dhammaystiran u buuxisa rajooyinka Apple. Mar labaad, Apple waxay ku soo rogeysaa astaanteeda goobo istiraatiiji ah iyo goobo muhiim u ah suuqgeynta.
Furitaankii hore iyo furitaankii, oo runtii hubaal noqon doonta isla heerarka kale ee la furay, macaamiisha iman kara way codsan karaan ballamo leh Genius isla markaana iska qor Maanta fasalada Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dukaanka cusub ee Apple ee Vienna, Austria, Febraayo 24
9x19 Podcast: Apple ayaa garaacay biriiga
Nooca cusub ee macOS, waxqabadka ayaa ka guuleysan doona astaamaha cusub